Imibuzo yokuThengisa ngokuBuza nokuPhendula | Martech Zone
Le infographic evela kwi-AboutUs sisishwankathelo esomeleleyo semibuzo ekufuneka siyibuze njengabathengisi bomxholo. Kwimeko yesi sithuba, ndiza kuphendula le mibuzo ngolu hlobo lulandelayo:
Ngubani -Ithagethi zethu ngabathengisi bemixholo emitsha naphakathi.
Intoni - le infographic kwimibuzo esisiseko intengiso yakho yomxholo kufuneka iphendule.
apho -Siza kupapasha i-infographic apha kwaye sizokwabelana ngayo kuwo onke amajelo asekuhlaleni, kubandakanya Twilley kwaye StumbleUpon.
Nini -Sithanda ukupapasha kusasa ekuseni ukunxibelelana nevolumu ephezulu yabafundi kwilizwe liphela.
Ngoba Indawo yethu yaziwa ngokwabelana ngeentengiso ezinkulu kwaye iyeyona ndawo ekuyiwa kuyo ngabo.
Njani - Ukwabelana ngale infographic evela kwi-AboutUs kubonelela ngentengiso yomxholo ngesakhiwo esikhulu sokuphuhlisa iqhinga labo. Ndingahamba ndiye kwi Amanyathelo ama-7 okuphucula umxholo ngokulandelayo ukuphuhlisa isicwangciso ngokubanzi!
tags: ngathiUmxholo onyanzelayoumxholo we-infographicUkuThengiswa kweMpahlaumxholo wentengiso infographicnjaniintengiso ye-infographicIntonininiaphoNgubaningoba
Ipokotho: Ukunyusa uthungelwano kwiMicimbi yezeManyano
Ndingaphantse ndiphikisane nelithi inyathelo lokugqibela (ukubetha ngenene oku epakini) iya kuba kukuthetha nomntu u-1-1 ukufumana isezantsi ngokwenene. Umhlobo wam wenze oku ngoMateyu Bucher-oseke iarhente yolawulo loyilo olunempumelelo ukusuka emhlabeni